Ahoana ny fomba hamohana ny Samsung Galaxy S4 maimaim-poana | Androidsis
Francisco Ruiz | | Samsung, fiarovana, Tutorials
Amin'ny teôria, ny fomba fanao izay amidio finday mifamatotra amin'ny orinasanao, tsy fampiharana ara-dalàna izany ary zonay rehetra ny manamora ny mamaha ny code ny terminal hahafahana mampiasa azy amin'ny orinasan-telefaona rehetra. Te hahalala ve ianao? ahoana no ahafantarana raha maimaim-poana ny findaiko?
Saingy satria tsy tanteraka fotsiny izany indraindray, dia entinay anio ny fomba hanafahana ny Samsung Galaxy S4 modely GT-I9505, ny tenantsika ary malalaka tanteraka.
Tsy azo lazaina fa tsy Androidsis Izaho koa tsy tompon'andraikitra amin'izay mety hitranga amin'ny fitaovanao, na dia manaraka an'io aza ianao torolàlana ho an'ny taratasy tsy misy zavatra hafahafa tokony hitranga, ny hany zavatra dia ny hananantsika ny marika vaovao Samsung Galaxy S4 maimaim-poana tanteraka ary tsy mandoa denaria amin'ny asa.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny manokatra ny keypad an-tariby sy ny dial 0011 #, tsindrio ny bokotra menio ary ao amin'ny menio milatsaka izay miseho dia mifidy miverina na indray, tsindrio indray ny bokotra menio ary safidio ny safidy Fandraisana, hoy izahay nanoratra 1 ary manaiky ny hiditra amin'ilay maody izahay Fomba fanompoana.
Tsindrio indray izao ny bokotra menio ary indray aoriana, ao amin'ny efijery vaovao izay hiseho dia hisafidy ny safidy voalohany isika UMTS.
Misafidy ny safidy voalohany indray isika izao, antsoina efijery debug ary avy eo ny laharan'ny safidy 6 Fanaraha-maso ny telefaona.
Ao amin'ity efijery vaovao ity dia mifidy ny safidy isika 6 Hidy tambajotra.
Safidintsika izao ny safidy fahatelo antsoina PERSO SHA256 OFF
Hiverina amin'ny menio lehibe an'ny Fomba fanompoana tsindrio ny bokotra menio ary miverina na miverina.
Hisafidy ny safidy isika izao 6 mahazatra ary avy eo ny laharan'ny safidy 6 NV fananganana indray.
Ao amin'ity efijery vaovao ity dia mampahafantatra antsika ny terminal fa misy a Gold Backup, tsindrio ny safidy isa 4 Avereno ny backup.
Raha narahinay tsara daholo ny dingana rehetra, dia hijanona ho voasakana hatrany ny terminal, avy eo hamerina azy ho azy Na dia teo aza isika dia tavela kelikely miaraka amin'ny efijery mainty, nitazona ny manga ary koa ny bokotra capacitive roa.
Ity dingana ity dia mety maharitra roa minitra na telo, rehefa mifoha ianao dia hanana ny azy izahay Samsung Galaxy S4 navoaka tanteraka ary manan-kery ho an'ny orinasa rehetra, izany rehetra izany maharitra ary tsy nandany denaria na tsy mila mianatra ny fomba hanonganana Samsung Galaxy S4 mamoaka azy.
Fanazavana fanampiny - Sintomy ny kinova farany avy amin'ny Play Store
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ahoana ny fomba hamohana ny modely Samsung Galaxy S4 GT-I9505 maimaim-poana
rolbermar dia hoy izy:
Salama, izaho Marcelo ary momba ity fomba famoahana ity dia mila milaza aho fa nividy terminal I9505 roa ary mahaliana fa ny iray tamin'izy ireo dia navotsotra toy izao, fa ny iray hafa isaky ny manandrana aho dia manome hadisoana amiko ary tsy mamoaka.
Faly aho raha mampahafantatra ahy fomba hafa ianao, satria efa nanandrana azy imbetsaka aho ary tsy mandeha izany.
Mamaly an'i rolbermar
zazalahy dia hoy izy:
Mampihomehy, mety efa namaha ilay rindrambaiko tany ho any izy ireo ary tamin'ny vitsivitsy voalohany dia azo natao izany ary tsy izany.
Fomba hafa azo soloina, na miandry fangatahana hamahana azy, na manao ny fomba teo aloha ianao ary rehefa miditra ny sim vaovao avy amina mpandraharaha hafa dia hanontany anao ny kaody famohana tambajotra, izay azo aorian'ny fandoavam-bola amin'ny iray amin'ireo (magazay) manolotra ny hamaha ny findainao avy amin'i imei.
Mamaly an'i chacho
Yuli dia hoy izy:
Salama, ny olako dia tsy mamela ahy hiditra ny menio aorian'ny fametrahana 1 sy ny fanekena amin'ny fanalahidy ... fanampiana ...
Valio i yuli
Toy izany koa no nitranga tamiko. mila manova ny rom ianao vao afaka manao azy.
Narotsako ny xuamdn izay farany avy amin'ny Samsung, ofisialy.
ary azoko atao ny mampiditra an'io menio io, ny mitranga dia na izany aza ny tutorial amin'ny faran'ny fanaovana azy, ary rehefa ampidiriny ny sim vaovao dia nangataka tamiko ny kaody famaha tambajotra izy.
Midika izany fa tsy nety tamiko ilay izy.
fa tsy marika 1 Q0 ary miandry fotoana fohy dia mila fotoana kely
fiara mifono vy dia hoy izy:
Nanaraka ny dingana rehetra aho, mandra-pahatonga mainty ny efijery ary nirehitra ny jiro, saingy mbola afaka ny s4-ko. Inona no azoko atao?
Mamaly amin'ny karatra
Salama tsara. Amin'ity fomba ity dia very ny fiantohana ?? Ary afaka manavao ny telefaonintsika amin'ny android 4.3 (ofisialy) isika rehefa hivoaka ??? Misaotra betsaka anao.
Raha mety aminao io fomba io dia tsy ho very ny antoka ofisialy na ny rafitra fanavaozana OTA.
Yahya dia hoy izy:
Salama tsara, nanandrana an'ity fomba ity aho saingy rehefa manome fanalahidy fampidirana aho ary mametraka 1 ary averiko indray, tsy azoko ilay menio vaovao misy ny UMTS ... ary tsy haiko intsony ny fomba hanaovana azy afaho ny I9505: S
Valio i Yahya
dordelly dia hoy izy:
Manana olana mitovy amiko aho fa aorian'ny fametrahana 1 dia tsy mampiseho ny menio lehibe. inona no tokony hataoko??
Valio i dordelly
izahay 3 dia manana olana mitovy ... fanampiana
Salama, nahavita namaha azy ve ianao?
Nadia tischelman dia hoy izy:
Manana an'io olana io ihany aho, mametraka 1, tsy mampiseho ny menio lehibe hisafidianana ny UMTS ... ahoana no anaovako azy?
Valiny tamin'i Nadia Tischelman
MrCvG dia hoy izy:
Ho an'ny olana tsy miseho ny Menu aorian'ny fanindriana 1 dia satria tsy avelan'ny kinova finday Modem, tokony ampidirinao amin'ny Odin ilay kinova, mitady ao amin'ny google dia ho hitanao haingana be ny fomba hanaovana io, io izay vitako, fa marina fa aorian'ny fanarahana ireo dingana, ny finday dia mangataka amiko hatrany ny kaody manokatra ny sim, izany hoe, tsy mandeha amiko izany, tsy haiko raha dia satria 4.4.2 ny romako, handeha hizaha toetra aho raha afaka mametraka rom 4.2 miaraka amin'i Odin ary manandrana manao ireo dingana ireo indray.
Valiny amin'i MrCvG
Diso aho tamin'ny fanehoan-kevitra teo aloha, ny kinova izay hifindrako dia 4.3 Stock.
Reycross dia hoy izy:
Andao hojerentsika, nametraka ROM ofisialy aho raha tsy nisy programa mpivarotra, novako ny modem hahafahako miditra amin'ny menus, miaraka amin'i Odin izany rehetra izany. Napetrako tamin'ny 0 izy io mba maimaim-poana, tonga lafatra ny zava-drehetra fa, amin'ny dingana farany hamerenana azy io, manome ahy efijery diso haingana aho ary miverina indray, fa mazàna dia tsy mijanona ny efijery ary mandeha ny LED na na inona na inona, famerenana amin'ny laoniny mahazatra ary tsy mahatratra ahy….
Eo tsy hitako izay hatao hafa hanipy ilay lamba famaohana. Misy vahaolana ve ??
Valiny tamin'i Reycross
Misaotra anao tamin'ny fanampianao, raha informati madio ianao
vico dia hoy izy:
… Tsy mamela ahy hanao ny dingana faharoa… satria hoe aiza no misy ny serivisy: voafetra… fanampiana…
Mamaly an'i vico
Sebastian Reyes dia hoy izy:
Salama, mitovy amin'i Vico ihany no mitranga, tsy miseho ny menio, miteny amiko serivisy izy: voafetra
Valiny tamin'i Sebastian Reyes
Nanaraka ny dingana rehetra ato amin'ity lesona ity aho ary rehefa namely ny 'Restore Backup' dia mahazo hafatra diso aho, mamerina ny telefaona izay mbola voasakana ...
Lamas dia hoy izy:
Toy izany koa no mahazo ahy toa an'i Carlos, andeha hojerentsika raha misy mamaha azy
Tsy raharahako fa ireo voalohany rehefa mametraka ny 1 dia mijanona ho mitovy ity fomba ity dia mandaitra amin'ny 1 amin'ny 20 heveriko 🙁
Christianborg dia hoy izy:
Ami tsy miditra ny menio dia tsy afaka miditra ao amin'ny menio hafa fotsiny ny # # 0011 # na tsy miditra
Valiny tamin'i Christianborg
Ao amin'ny hidin'ny tamba-jotra ihany no ahazoako ny safidy voalohany, Info PERSO SHA256. Tsy misy famantarana ny ON sy ny OFF, misy mahalala ve ny antony?
Rafael, ny zavatra mitovy amiko ihany no mitranga amiko, safidy iray ihany no hita ao anaty tambajotra, ary tsy afaka manao na inona na inona avy any aho. Raha afaka manampy anay ianao azafady.
Rafael dia tsy miseho ireo safidy roa hafa satria huelebicho ianao ...
Ho an'ireo izay tsy mahazo ny menio umts dia andramo apetraka ny Q1 fa tsy 0000, mamela ahy toy izao aho, ny olana dia rehefa tonga any amin'ny hidin-trano aho izay tsy mahazo afa-tsy info na tsia.
Mamaly an'i pau
Larry dia hoy izy:
Hitako ny tenako, ny safidy hafa dia np, ahoana no hataoko ???
Valiny tamin'i Larry
Unique Altamirano dia hoy izy:
Salama. Misy fomba iray hanodikodinana ireo safidy ireo amin'ny alàlan'ny adb? Misaotra
Valiny tamin'i Unico Altamirano
Josete dia hoy izy:
Raha tokony ho 1 dia tsy maintsy miantso Q0000 ianao, miandry segondra vitsy dia hiditra ny maody fanompoana 😉
Mamaly an'i josete
Nisy nahita ny vahaolana ve? Tsy misy soritry ny safidy On sy Off.
Salama, tsy mazava amiko raha io fomba io no "mandreraka" ilay finday. Mirary ny soa indrindra.
Salama, tiako ho fantatra raha manan-kery ho an'i Lima Peroa sy ireo tambajotram-pifandraisana ao amin'ny fireneko ity fomba ity. Manana s4 9515l aho ary bitel ihany no vakiny. Te-hamaky mazava sy hihetsika aho. Misaotra mialoha
salama, mamoha ny imei, tsy mitovy amin'ny mamoha azy ve izany?
Salama, mila mametraka Q0000 ianao dia miasa. jerena
nilaina izany dia hoy izy:
Salama, manana android 5.0.1 aho ary tsy vitako izany, fa ny fanoratana ny hevitra mangataka fanampiana dia voavaha ho azy izany, rehefa tonga teo amin'ny efijery niaraka tamin'ny perso sha256 aho, saingy hitako fa teo ny safidy mahazatra ny efijery voalohany, ary narahiko ireo dingana izay nopetahany tsipiriany taty aoriana momba an'io safidy io, ary nisintona hatramin'ny farany izy ary voila, nanokatra.
Ilaina ny famaliana
Salama, mila fanampiana aho, hay rehefa tonga amin'ny dingana farany aho dia tsy hitako ny fiverenan'ny sha256 fa ny safidy voalohany ihany no azoko, info sha256 ... tsy hitako izay hatao, misy afaka manampy ve izaho azafady ???
Ny zavatra mitovy amiko dia mahazo ahy, miditra amin'ny Q0000 aho fa ny safidy info PERSO SHA256 ihany no hitako na ny dian'ireo safidy hafa hanohizana ny famotsorana. Andao hojerentsika raha misy afaka manampy antsika. Misaotra!
Nathalie Maria Gonzalez Guinaldo dia hoy izy:
TSY manome ahy ity safidy ity ihany SHA256 TSY MISY SAFIDY farany, manome ahy fotsiny ny safidy INFO SHA256 INFO
Valiny tamin'i Nathalie Maria Gonzalez Guinaldo
Korontana amin'ny HTC: fandroahana, olan'ny famokarana ary loza voalohany